Kuyini i-glycemia, indlela yokuyiqapha nokuthi uyigcina kanjani kahle idayari yesifo sikashukela > Ukulawulwa kwesifo sikashukela
Kungani idayari yokuzihlola yesifo sikashukela idingeka?
I-Glycemia (ehunyushwe isuselwa esiGrekini. I-Glykys - "emnandi", haima - "igazi") iyinkomba yokugxila kwe-glucose egazini. Izinga lokuzila ukudla kweglycemia liyi-3.3 - 6.0 mmol / l. kubantu abadala.
Kucace bha ukuthi ukugcina impilo kungumthwalo womuntu uqobo ongeke wabekwa emahlombe odokotela abakhona.
Udokotela we-endocrinologist uletha kuphela ukuphawula kwakhe nezincomo zakhe ekhadini lesiguli, kepha akakwazi ukuqapha isiguli ngasinye.
Ngakho-ke ekwelashweni kwesifo sikashukela. Yonke imizamo yokulondolozwa kwesimo esijwayelekile ikukhathalela abanesifo sikashukela kuphela, okufanele bafunde ukulawula kahle lesi sifo ukuze singabhubhisi umzimba wonke.
Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukuthi ngokuzimela ufunde ukulawula izinga loshukela egazini, elibizwa nje ngokuthi nje - i-glycemia.
Kungani ngidinga ukuziqapha ngesifo sikashukela?
Uma uqala lesi sifo, khona-ke emva kwesikhathi esithile, amazinga eglucose aphezulu azokuholela emiphumeleni emibi. Vele, isimo ngeke sishintshe sibe sibi ngokushesha, kodwa kuphela emva kweminyaka yokuxilongwa.
Uma kwenzeka i-glycemia engasebenzi kahle, ukugxila koshukela egazini kungahlala kumanani aphezulu isikhathi eside. Ngokuzayo, lokhu kuholela ekuxubeni kwezakhi eziningi zamaprotheni emzimbeni wonke. Cishe zonke izitho zomzimba ziyahlupheka ngalokhu: isibindi, izinso, amanyikwe, uhlelo lwenhliziyo, njll. Umuntu onesifo sikashukela uhlushwa ikhanda elihlala likhona elibangelwa umfutho wegazi ophakeme, iso lakhe liba limbi kuze kuphele ngokuphelele, izitho zakhe zingasazweli, imilenze, izingalo, ubuso buvuvukala, umuntu ukhathala ngokushesha.
Kungenxa yalesi sizathu ukuthi isifo sikashukela singenye yezifo ezikhohlisayo, imiphumela yako ethinta abantu abaningi ngokwengeziwe.
Ngenqubo engalawulwa yalesi sifo, akunakwenzeka ukubona nokugwema ukugxuma kwe-glycemia ngesikhathi, okuholela ekuphazamiseni okunempilo okusongela impilo (njenge-ketosis, ketoacidosis, njll.), Noma, ukuwa kwayo, lapho umuntu angawela ekhubeni (hypoglycemia).
Ngedayari yokuzihlola yesikhathi eside yesifo sikashukela, kulula kakhulu ukuhamba kulesi simo, futhi udokotela obonayo uzokwazi ukulungisa ukwelashwa ngesikhathi ukuze avimbele izinkinga ezahlukahlukene ezingase zizwakale. Ngaphezu kwalokho, ngokwazisa ezinye izidakamizwa ezintsha kuwe, ushintsho ekudleni, ekudleni, ekufukukeni komzimba, idayari ikhombisa ukusebenza kahle kwezinyathelo ezithathiwe, njengokungabikho kwabo noma ukonakala kwemiphumela.
Kuphela ngosizo olubonakalayo lapho umuntu angabamba, abambezele, avikele ukukhula kwemiphumela engathandeki yesifo sikashukela.
Ngaphandle kwalokho, umuntu onesifo sikashukela uzozithola esesimweni esinzima kakhulu lapho, njengekati elingaboni, athembela inhlanhla, okuthi, ngokomthetho wencazelo, ihlala yehluleka futhi ilethe ubunzima obuningi.
Ungalinganisa kanjani i-glycemia?
Manje kulula kakhulu ukulandela umkhondo wohlelo lwakho lwe-glycemic ngenxa yama-glucometer.
Le yidivayisi ephathekayo, enethonsi elilodwa nje legazi, elingakwazi ukucacisa ukugcwala koshukela.
Amamodeli wakhona anamuhla afakelwe umthamo wememori eyakhelwe ngaphakathi futhi kwimodi yokuzenzakalelayo ingarekhoda lonke ushintsho kule paramente. Ngaphezu kwalokho, ezinye zazo zingaba nokubala inani le-insulin elidingakalayo, okufanele linikezwe isiguli noma libonise izinga le-cholesterol yegazi, i-glycated hemoglobin, njll.
Ikhithi ejwayelekile yokulawula ushukela wegazi ifaka:
Lezi yizitini ezikhethekile zepulasitiki (isikhafu) ngenaliti efakwe esibayeni sesirinji. Kunezinhlobo eziningi, osayizi futhi azifanele wonke amadivayisi. Ngakho-ke, lapho uthenga, unaka ukwakheka komkhiqizo. Kungcono uma uthatha isampula lancet nawe futhi, kanye nosokhemisi, khetha ikhithi elifanela imodeli yakho.
Zithengiswa kwinethiwekhi yamakhemisi kusuka ezingcebeni ezingama-25 noma ngaphezulu (25, 50, 100, 500) ngentengo yama-ruble angama-200.
Lezi zinaliti zihlala zifakwa inzalo futhi kwesinye isikhathi azikwazi ukusetshenziswa!
Ngokusetshenziswa okuphindaphindiwe, inaliti ichithiwe (ibuthuntu), okuyingxenye yezinto ezibonakalayo zomuntu ezihlala kuyo, okuyisisekelo esivundile sokuthuthuka kwe-microflora eyingozi. Uma umunca umunwe wakho ngenalithi enjalo, khona-ke isifo singalethwa egazini.
Umgomo wesenzo sabo ufana nokuhlolwa kwe-litmus, lapho igazi lingena lapho kuvela khona amakhemikhali, imiphumela iboniswa esikrinini.
Amaconsi athathwa ohlangothini olulodwa lomucu (indawo ekhethekile yokungenisa), enye ingxenye ifakwa kwi-analyzer.
Imichilo iyathengiswa futhi ekhemisi lezingcezu ezingama-25 noma ngaphezulu. Intengo yabo iphakeme kakhulu kunentengo yama-lancets (kusuka kuma-ruble angama-600 wezingcezu ezingama-25).
Ipeni ezenzakalelayo, isirroli somunwe
Kufakwa ilonda ngenaliti. Ngenxa yokumiswa okwakhelwe ngaphakathi, ungaguqula ubude binaliti (ukuthi inaliti izongena ngaphansi kwesikhumba kanjani ngemuva kokudonswa).
Ngaphambi kokuqhubeka nokuhlolwa kwegazi, geza izandla zakho ngomkhiqizo wokuhlanzeka.
Lapho nje isibambo sesilungisiwe, sifakwa eduze kwesayithi lomjovo ohlanziwe ngaphambili (ngokwesibonelo, qiniseka ukuthi ugeza inyama yomunwe ngotshwala noma yisiphi isibulala magciwane esitholakalayo). Bese ukhulula i-lever. Ngemuva kokuchofoza okubonakalayo, inaliti lehla futhi ngokushesha ihlwitha indawo efiselekayo yesikhumba.
Isifundi asidingi gazi liningi; ukulahla okuncane nobubanzi bamamilimitha ambalwa kuzokwanela.
Uma igazi lingakaveli, khona-ke awudingi ukuphinda umunwe wakho. Kwanele ukucwilisa isikhumba ezungeze ukubotshwa kancane amahlandla ambalwa.
Uma kusekhona igazi ngemuva kwalokhu, khona-ke mhlawumbe ubude binaliti abwanele. Lungisa ipeni lesirinji ngokwelula inalishi izinyathelo ezimbalwa bese uzama futhi.
Ukujikeleza igazi kangcono, hlikihla futhi wazi kahle izandla zakho ku-cam imizuzwana embalwa.
Ngemuva kokuthi umucu wokuhlola usufakiwe kwi-analyzer, kuzodingeka ulinde isikhashana kuze kufundwe imininingwane. Ngemuva kwesiginali esibonakalayo, imiphumela ivela esikrinini.
Inqubo ngayinye inendlela yayo yezimpawu, engatholakala ngemiyalo. Okulula kakhulu kuphela ukunquma ukuqoqwa koshukela, ngakho-ke, izinhlamvu ezingaphezu kuka-5 - 10 azikhonjiswa esikrinini. Zingaveza: i-glycemia ku-mmol / l ne-mg / dl, amaphutha angokomfanekiso (ngokwesibonelo, umucu wokuhlola awufakwanga kahle), inkomba noma inkomba yephutha, idatha yokulinganisa, njll.
ishaja yebhethri noma umthombo wamandla
imfundo ehunyushelwe ezilimini ezihlukile
ikhadi lewaranti (kusuka ngonyaka ongu-1 noma ngaphezulu)
Abahlaziyi badinga ukunakekelwa okukhethekile komuntu. Izikhathi eziningana ngesonto zidinga ukusulwa ngemisipha ye-antibacterial.
Zenzele umthetho wokubheka amamitha futhi uwagcine uhlanzekile ngaso sonke isikhathi.
Ngokubheka ukuthi konke okudliwayo kuyaphela ngokushesha, ngoba kufanele usebenzise kaningi (kothile izikhathi eziningi phakathi nosuku), ukuziqapha ngokwakho sikashukela kuyinhlanhla ebizayo.
Ngakho-ke, eRussia kunohlelo lwezokwelapha lwezenhlalo, ngokusho kwabo bonke abantu abanesifo sikashukela abangathembela emithini eminingana yamahhala, izimpahla kanye nama-glucometer, kungakhathalekile iminyaka yobudala, isimo senhlalo nesimo sezimali.
Ngaphezu kwalokho, abanesifo sikashukela abaningi, ababizwa ngokuthi “abantu abadala”, babhekana nezinkinga ezinkulu zempilo lapho lesi sifo kanye nemiphumela yaso iba yingozi impilo yabo yonke futhi sigweme ukucindezelwa okuqhubekayo, kufanele uphendukele kusizo lwabantu abangaphandle ukusiza iziguli zibhekane nemisebenzi.
Ungayikhetha kanjani i-glucometer
Ukuze unqume ukuthi iyiphi idivayisi edingekayo, kubalulekile ukuyiqonda kahle ukuthi yini okudingekayo, ngoba ngohlobo 2 lwesifo sikashukela akudingekile neze ukuba negajethi eyindida eyayingalinganisa ngokuzenzakalelayo umthamo wehomoni.
Ngakho-ke, izindlela zokukhetha eziphambili zifaka:
Intsha izokhetha ubuchwepheshe obunamakhono obanzi, kepha kubantu abadala kuba lula ukwedlula lokhu.
Ngohlobo 2, akudingekile ukuthenga ama-glucometer abizayo, kepha kubantu abanesifo sikashukela sohlobo 1, ukuhlukaniswa ngemisebenzi ehlukahlukene kuzokwenza lula umsebenzi wansuku zonke.
Intengo ayivezi njalo ikhwalithi yedivayisi. Imvamisa ama-glucometer asezingeni eliphansi anemba kakhulu ekubaleni kwawo kunalawo abiza kakhulu, acindezelwe ngethoni yeminye imisebenzi ethinta ngqo izindleko eziphelele.
Ukuba khona kwecala eliqinile kuqinisekisa ukuthi ngemuva kokuwa ngengozi ngeke kulinyazwe futhi kuzoqhubeka ukusebenza njengenjwayelo. Ngakho-ke, kungcono ukungatholi abantu abangathathi ntweni abebekhulile abanamakhono emoto angasebenzi kahle noma umuzwa wezandla ngenxa yokuhlaselwa isifo sikashukela se-neuropathy.
Inani lezilinganiso ngosuku liyinkomba ebaluleke kakhulu. Idivayisi kufanele ibe lula ngangokunokwenzeka ukuyisebenzisa ngisho noma kuhambo olude.
Uma umuntu engaboni kahle emehlweni, khona-ke ukuba nesikrini esikhulu, ukukhombisa i-backlight yisisombululo esihle kakhulu.
ijubane lokulinganisa nekhwalithi yokuhlolwa kwemiphumela
Ngaphambi kokuthenga, hlola ukuthi ngabe kukhona iphutha lapho ihlaziywa idatha ngokushesha.
Kubantu asebekhulile noma kubantu abanokulimazeka okubukwayo, amadivayisi anale nketho andisa amandla awo azimele, ngoba amadivaysi awagcini nje ngokuzwakalisa umphumela, kodwa futhi ahambisana nayo yonke inqubo yesampula yegazi ngezwi: ukufaka kanjani umucu wokuhlola, oyinkinobho yokucindezela kuwo qala inqubo yokuqoqa idatha, njll.
inani lememori yangaphakathi
Uma isiguli ngokuzimela sigcina idayari yokulawula, khona-ke ungakhetha amamodeli ashibhile ngamaseli wamahhala angama-100.
Ngenxa yalo msebenzi, angakwazi ukubala i-glycemia ephakathi yezinsuku eziyi-7, eziyi-14 noma ngaphezulu, ngaleyo ndlela abonise amandla amahle noma amabi okuphathwa kwesifo.
hlangene namanye amadivaysi
Ukuba khona kwalolu khetho kukuvumela ukuthi uxhume imitha kwikhompyutha noma usebenze nedatha yokuhlaziya ngokusebenzisa izinhlelo zokusebenza zeselula.
Yebo, uma yena ngokwakhe ekhumbuza ukuthi sekuyisikhathi sokukala izinga le-glycemia. Abantu abaningi asebekhulile bakhohlwa kakhulu futhi le ndlela izodingeka kakhulu empilweni yabo yansuku zonke.
Amandla wokunquma imizimba ye-ketone, i-glycated hemoglobin, i-hematocrit, i-cholesterol, njll. Lokhu akuyona nje i-glucometer, kepha yidivaysi yendawo yonke (umhlaziyi wezinto eziphilayo ogcwele ngokugcwele), izindleko zazo eziphakeme kakhulu manje (ngaphezu kwama-ruble angaphezu kuka-5.000 kowodwa “olula”).
Abantu abaningi abamane bacabange ukuthi kuzokubiza malini ukugcina imishini ngaphambi kokuthenga. Imichilo efanayo inobubanzi obukhulu kakhulu bezintengo ukusuka kuma-ruble angama-600 kwezingcezu ezingama-25 kuye kuma-ruble angama-900. Konke kuncike kwimodeli nakumenzi wamadivayisi. Kungahle kube ngaleyondlela lapho umhlaziyi uqobo engabizi, kepha okutholakalayo kuyabiza ngokungavunyelwe.
Lapho uthenga idivaysi, kufanelekile ukuthi ungabheki ngentengo yayo kuphela, iphutha lokulinganisa nokubalwa, kepha futhi nenani nekhwalithi yokubuyekezwa ngakho ku-Intanethi!
Ukubukeza umuntu wangempela owasebenzisa igajethi ethile kuzoba imininingwane ebalulekile ukwenza ukukhetha okuhle.
Uma ucabanga ngezinketho ezahlukahlukene zabahlaziyi abathengiswa kwinethiwekhi yezitolo, umuntu angathola iziphetho ezilula mayelana nokuthi kushibhile ukuthenga ama-glucometer ezitolo eziku-inthanethi.
Kushibhile lapha ngoba lolu hlobo lwesitolo aludingi isikhala esengeziwe sokuthengisa esinehholo lokubonisa labathengi, okufanele likhokhe. Abahleli bezindawo zokuphuma baqasha izindawo zokugcina kuphela. Azizitholi ezinye izindleko zokugcina.
Kodwa-ke ingozi yokuthola izimpahla ezisezingeni eliphakeme iyanda, isitolo se-inthanethi simane singathwali umthwalo wayo, futhi uma kwenzeka okuthile ezimpahleni ngenkathi kusebenza (uma kukhona irisidi nesiqinisekiso esiphelelwe yisikhathi), khona-ke ayikho indlela yokuthola labo abake baba uthengise lo mkhiqizo, ngoba i-Intanethi igcwele abagibeli nalabo abathengisa imishini yezokwelapha ngaphandle kwelayisense.
Ukuze ungabihlanganyeli wosizi oqondile kulo mcimbi, thenga izimpahla kubathengisi abagunyaziwe noma kumasayithi asemthethweni enethiwekhi ekhemisi.
Uma uhlangabezana nanoma yiziphi izinkinga ngedivayisi, ungahlala uyiyisa eMnyangweni osebenza wenethiwekhi ekhemisi lapho uthengile khona noma lapho izimpahla ezazithunyelwe zazithathwe (khona lapho kuhanjiswa khona).
Imingcele eyengeziwe efiselekayo ukufaka kudayari yokuzithiba
Ngaphezu kwalokhu okungenhla, kahle, kufanele silungise okulandelayo:
imiphumela yaselebhu (igazi le-biochemical nomchamo, i-cholesterol, i-bilirubin, imizimba ye-ketone, amaprotheni, i-albhamuin, i-glycated hemoglobin, i-uric acid, irea, njll.)
umfutho wegazi (ungathenga umgadi okhethekile wegazi, izindleko zazo zihlukile kuma-ruble ayi-1500 nangaphezulu)
inani lamayunithi esinkwa adliwe ngokudla phakathi nosuku, kucatshangelwa umthwalo we-glycemic wemikhiqizo noma inkomba ephelele ye-glycemic
inani le-insulin elawulwa noma umthamo wemithi othathwe
ushintsho ekudleni (uphuze utshwala, udle umkhiqizo onqatshelwe, njll.)
Ukuxineka kwengqondo (ukucindezela kuthinta kabi isimo sempilo, kusheshisa ukukhula kwesifo)
okuhlosiwe kwe-glycemic (kumele sibone ngokucacile ukuthi yimiphi imiphumela esiyilwela, ukuze sizikhuthaze kancane)
isisindo ekuqaleni kwenyanga nasekupheleni
isikhathi nobungako bokuzivocavoca komzimba
ukudla kwe-glucose okusheshayo noma noma iyiphi imiphumela engathandeki (kungcono ukuyigqamisa ngombala ohlukile, umaki noma ipeni)
Isampula Yesifo Sikashukela Sikashukela
Ukwenza lula umsebenzi, sinikeza isibalo esilula nesilula lapho kulula ukubala khona i- “Bolus” - umthamo, umthamo we-insulin, ulungiswa ngokuya ngenani lokudla okuthathiwe, kubalwa ku-XE (amayunithi esinkwa) kanye nesisekelo sokufundwa kwemitha.
Kepha! Umuntu ngamunye kufanele abe namagugu abo okubambelela kuwo.
Ngakho-ke, ngaphandle kokubonisana nodokotela wakho, sebenzisa le ndlela ngokuqapha!
Glycemia mmol / L I-Glycemia ukulungisa i-bolus Ukudla kokudla I-XE ekudleni kokudla
Idayari yokuzihlola kanye nenhloso yayo
Idayari yokuzihlola iyadingeka kwabanesifo sikashukela, ikakhulukazi ngohlobo lwesifo sokuqala. Ukugcwaliswa kwayo njalo nokubalwa kwemali kwazo zonke izinkomba kukuvumela ukuthi wenze okulandelayo:
Landela impendulo yomzimba kumjovo ngamunye we-insulin,
Hlaziya izinguquko egazini,
Gada i-glucose emzimbeni usuku lonke futhi uqaphele ukugxuma kwayo ngesikhathi,
Usebenzisa indlela yokuhlola, bonisa isilinganiso somuntu ngamunye esidingekayo se-insulin, esidingekayo ekuhlanzeni kwe-XE,
Zibonele ngokushesha izinto ezimbi nezinkomba ze-atypical,
Gada isimo somzimba, isisindo nomfutho wegazi.
Imininingwane eqoshwe ngale ndlela izovumela i-endocrinologist ukuthi ihlole ukusebenza kahle kokwelashwa, futhi yenze nezinguquko ezifanele.
Izinkomba ezibalulekile nokuthi ungazilungisa kanjani
Idayari yokuzihlola yesifo sikashukela kufanele ibe nezinkomba ezilandelayo:
Ukudla (ibhulakufesi, isidlo sakusihlwa noma isidlo sasemini)
Inani lamayunithi esinkwa ekwamukelweni ngakunye,
Umthamo we-insulin olawulwa noma ukuphathwa kwezidakamizwa ezonciphisa ushukela (ukusetshenziswa ngakunye),
Imitha kashukela wegazi (okungenani izikhathi ezi-3 ngosuku),
Idatha enhlalakahleni ephelele,
Umfutho wegazi (isikhathi esingu-1 ngosuku),
Isisindo somzimba (isikhathi esingu-1 ngosuku ngaphambi kokudla kwasekuseni).
Iziguli ezinokweqile zingalinganisa ingcindezi yazo kaningi uma kunesidingo, ngokubeka eceleni ikholomu ehlukile etafuleni.
Imiqondo yezokwelashwa ifaka inkomba efana ne "ukuhlanganisa ushukela omncane ojwayelekile"lapho izinga likashukela lilingana ngaphambi kokudla okubili kokudla kokuthathu (ukudla kwasekuseni + kwasemini noma kwasemini + Uma "ukuhola" kuyinto ejwayelekile, khona-ke i-insulin ebambela isikhashana inikezwa ngenani elidingakalayo ngesikhathi esithile sosuku ukuphula amayunithi esinkwa. Ukuqapha ngokucophelela lezi zinkomba kukuvumela ukubala umthamo ngamunye wokudla okuthile.
Futhi, ngosizo lwedayari yokuzihlola, kulula ukulandelela konke ukushintshashintsha kwamazinga kashukela okwenzeka egazini - isikhathi esifushane noma eside. Izinguquko ezisuka ku-1.5 ziye ku-mol / ilitha zithathwa njengejwayelekile.
Idayari yokuzithiba ingadalwa bobabili abasebenzisi be-PC abanokuzithemba kanye ne-layman elula. Ingakhiwa kukhompyutha noma udwebe incwajana.
Etafuleni lezinkomba kufanele kube "nekhanda" elinamakholomu alandelayo:
Usuku lweviki nekhalenda
Ishukela le-glucometer kathathu ngosuku,
Ukudonswa kwe-insulin noma amaphilisi (ngokuya ngesikhathi sokuphatha - ekuseni, nomlandeli.
Inani lamayunithi esinkwa kukho konke ukudla, kungakuhle futhi ukuthi ucubungule ama-snacks,
Amanothi ezempilo, izinga lomchamo we-umchamo (uma kungenzeka noma ngokuya ngokuhlolwa kwanyanga zonke), umfutho wegazi kanye nokunye ukukhubazeka.
Yimiphi imishanguzo abanesifo sikashukela abangayithola mahhala? Yini ehlanganiswe emqondweni wokuthi “iphakethe lezenhlalo yezokwelapha” futhi kungani ezinye izakhamizi zikwenqaba?
Amaresiphi we-dessert enempilo. Ikhekhe labanesifo sikashukela. Funda kabanzi kule ndatshana.
I-Aspen bark yesifo sikashukela. Izakhiwo eziwusizo nezindlela zokusebenzisa.
Ithebula lesampula lesibonelo lingabukeka kanjena:
Usuku I-insulin / amaphilisi Amayunithi esinkwa Ushukela wegazi Amanothi
Ekuseni Usuku Kusihlwa Ibhulakufesi Isidlo sasemini Ukudla kwakusihlwa Ibhulakufesi Isidlo sasemini Ukudla kwakusihlwa Ngobusuku
To Ngemuva To Ngemuva To Ngemuva
Ukuphendulwa okukodwa kwencwajana yokubalwa kufanele kubalwe masonto onke, ngakho-ke kuzoba lula kakhulu ukulandelela zonke izinguquko ngendlela ebonakalayo. Lapho ulungiselela amasimu wokufaka imininingwane, kuzodingeka futhi ushiye isikhala esincane kwezinye izinkomba ezingalingani etafuleni namanothi. Iphethini lokugcwalisa okungenhla lilungele ukulawulwa kokulawulwa kwe-insulin, futhi uma izilinganiso zikashukela zanele kanye, khona-ke amakholomu aphakathi nesikhathi sosuku angaqedwa. Ukuze kube lula, umuntu onesifo sikashukela angangeza noma asuse ezinye izinto etafuleni. Idayari yesibonelo yokuzithiba ingalandwa lapha.
Izicelo zokulawula isifo sikashukela sanamuhla
Ubuchwepheshe besimanje bunwebisa amandla abantu futhi benze impilo ibe lula. Namuhla ungalanda noma yiluphi uhlelo lokusebenza kwifoni yakho, ithebulethi noma i-PC, nezinhlelo zokubala amakhalori nomsebenzi womzimba zithandwa kakhulu. Abakhiqizi be-software nabanesifo sikashukela ababange besadlula - izinketho eziningi zedayari yokuzihlola online yenzelwe zona ngqo.
Yini i-ASD - 2? Isetshenziswa kanjani futhi yiziphi izifo? Yiluphi ikhambi lesifo sikashukela?
Amakesi anesifo sikashukela. Yini evunyelwe futhi yini enconyelwe ukuba ingafakwa ekudleni? Funda kabanzi lapha.
Izimpawu zesifo sikashukela emadodeni.
Ngokuya ngedivayisi, ungasetha okulandelayo:
Isifo sikashukela - idayari ye-glucose,
Isifo Sikashukela Somphakathi,
Ukuphathwa kwesifo sikashukela,
Umagazini wesifo sikashukela,
Isifo Sikashukela Xhuma
Isifo Sikashukela: M,
Okokusebenza kokufinyelela ku-Appstore:
Uhlelo Lokusebenza Sikashukela,
Umsizi WeSifo Sikashukela Wegolide
Isifo Sempilo Sikashukela,
Umsizi wesifo sikashukela
I-Diabetes Tracker ene-Dlood Glucose,
Isifo Sikashukela seMicro Pro,
Lawula Isifo Sikashukela,
Isifo Sikashukela Esheke.
Okudume kakhulu eminyakeni yamuva nje kube uhlelo lweRussia "Isifo sikashukela", ekuvumela ukuthi ulawule zonke izinkomba eziphambili zalesi sifo.
Uma ufisa, imininingwane ingathunyelwa ephepheni ukuze idluliselwe ngenhloso yokujwayelana nodokotela ohambelayo. Ekuqaleni komsebenzi nesicelo, kuyadingeka ukufaka izinkomba ngazinye zesisindo, ukuphakama kanye nezinto ezithile ezidingekayo ekubalweni kwe-insulin.
Ngaphezu kwalokho, wonke umsebenzi wokuncintisana wenziwa ngesisekelo sezinkomba eziqondile zeglucose ekhonjiswe yisifo sikashukela kanye nenani lokudla okudliwayo e-XE. Ngaphezu kwalokho, kwanele ukufaka umkhiqizo othize kanye nesisindo sawo, khona-ke uhlelo ngokwalo luzokubala inkomba oyifunayo. Uma ufisa noma ungekho, ungakufaka ngesandla.
Noma kunjalo, uhlelo lokusebenza lunezinto eziningi ezimbi:
Inani le-insulin yansuku zonke nenani lesikhathi eside alinqunyelwe,
I-insulin esebenza isikhathi eside ayibhekwa,
Akunakwenzeka ukwakha amashadi abukwayo.
Kodwa-ke, ngaphandle kwalokhu kubekeka phansi, abantu abamatasa kungenzeka balawule ukusebenza kwabo kwansuku zonke ngaphandle kokugcina idayari yamaphepha.
Ifomu ledayari yesifo sikashukela
Ukukhetha Cha 1 (amaviki ama-2)
Usuku I-insulin amayunithi / umuthi okwehlisa ushukela
Ekuseni Usuku Kusihlwa Ibhulakufesi Isidlo sasemini Ukudla kwakusihlwa
____________________ Mon __________ __________ __________ 1 ____ 2 ____ 1 ____ 2 ____ 1 ____ 2 ____
____________________ __________ __________ __________ 1 ____ 2 ____ 1 ____ 2 ____ 1 ____ 2 ____
____________________ Wed __________ __________ __________ 1 ____ 2 ____ 1 ____ 2 ____ 1 ____ 2 ____
____________________ th __________ __________ __________ 1 ____ 2 ____ 1 ____ 2 ____ 1 ____ 2 ____
____________________ Fri __________ __________ __________ 1 ____ 2 ____ 1 ____ 2 ____ 1 ____ 2 ____
____________________ Sat __________ __________ __________ 1 ____ 2 ____ 1 ____ 2 ____ 1 ____ 2 ____
____________________ ilanga __________ __________ __________ 1 ____ 2 ____ 1 ____ 2 ____ 1 ____ 2 ____
Usuku: _____________________ unyaka
Isisindo somzimba ______ kg
Isisindo esifunekayo ______ kg
Usuku: ____________________ unyaka
Ushukela wegazi mmol / L
Inothi (ingcindezi, utshwala, umsebenzi wokuzivocavoca, ukucindezela)
Ibhulakufesi Isidlo sasemini Ukudla kwakusihlwa
ngaphambili emva ngaphambili emva ngaphambili emva
Mon ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
tue ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
umshado ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
thu ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Fri ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Sat ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
ilanga ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Lamatafula ashicilelwa ekhasini lamabili edayari ekusakazweni kwayo.
Inombolo 2 (ngesonto)
Usuku Ibhulakufesi Isidlo sasemini Itiye eliphakeme Ukudla kwakusihlwa
ngaphambili ngemuva kwamahora ayi-1.5 ngaphambili ngemuva kwamahora ayi-1.5 ngaphambili ngemuva kwamahora ayi-1.5 ngaphambili ngemuva kwamahora ayi-1.5
ushukela wegazi __ __ __ __ __ __ __ __
XE __ __ __ __ __ __ __ __
Bolus __ __ __ __ __ __ __ __
Kudayari yakho, qiniseka ukuthi uqaphela ukuthi imiphi izidakamizwa ezithile, uhlobo lwe-insulin olusebenzisa phakathi nosuku.
Kuyalule futhi ukuthi ungakhohlwa ekhasini elingafani nalutho ledayari yakho yesifo sikashukela ukurekhoda ukuthi yikuphi ukudla, izitsha nokuthi kungakanani ivolumu abayidlile ngosuku oluthile.
Ngakho-ke ungahlola amakhono akho nekhwalithi yokuhambisana nezincomo udokotela wakho.
Ungalanda futhi nefayela ledayari yesifo sikashukela bese uphrinta itafula uma ufisa.
Uma uthola iphutha, sicela ukhethe ucezu lombhalo bese ucindezela u-Ctrl + Enter.